Amụma na nke ime mmụọ pụtara ọbọgwụ - Ihe Bible Pụtara
iphone m agaghị emelite ma ọ bụ weghachi
iphone 7 anaghị akpọ oku
SIM anaghị akwado iphone 6s
ihuenyo agaghị agbanye iphone
otu esi edozigharị email apple apple m
Amụma na nke ime mmụọ pụtara ọbọgwụ
Amụma na ihe ime mmụọ pụtara ọbọgwụ
Ntụkwasị obi, itule, ịhụnanya
Ọbọgwụ ahụ na -akụziri gị ka ị gbanwee ike nke obi gị na iji ya mee ihe dị elu. Mpempe akwụkwọ ya anaghị egbochi mmiri, yana ọ na-ekpo ọkụ na nke ahụ na-anọchite anya mmụba mmetụta sitere n'aka ndị ọzọ ka ha ghara imetụ gị aka n'ime wee nwee ike nweta udo n'ime onwe gị. Ọ na -amụta ịzụlite nghọta gị maka ndị ọzọ yana iji ịhụnanya wee mata oke gị.
Akụkụ gbara ọchịchịrị: Ọbọgwụ ahụ na -ezo aka n'echiche efu na eziokwu dị nro, echiche efu, mgbakasị, anyaụfụ, ịma ụma kparịa asịrị, ịgba asịrị, imebiga ihe ókè maka ike mmadụ, ọchịchọ nke ime ka ihe dị mkpa karịa ka ha dị, mmetụta nke ịbụ onye na -enweghị mmasị na nke a na -ejighị kpọrọ ihe.
Ọmarịcha nrọ nrọ ụnyaahụ. Nke a enweghịkwa ike ịbụ ihe ọ bụla m hụrụ, nụ ma ọ bụ nwee n'ime ụbọchị niile.
M na -eje ije n'oké ọhịa na -achọ ụlọ nwanne m nwoke (dị ka a ga -asị na ọ ga -ebi n'oké ọhịa). Ọbọgwụ ọhịa na -eso m oge niile (lee foto), ihe ijuanya bụ na ọ na -anọkarị n'elu osisi, ihe a na -adịghị ahụkebe maka ọbọgwụ. Ọbụna onye bịara abịa: ọ buru ibu dị ka swan dara ogbi!
Mgbe m nọdụrụ ala n'oche ezumike, ọ fepụrụ wee dakwasị n'apata m! Karịa nke ahụ, ọ chọdịrị ịmakụ nke m ji ọ gaveụ nye ya :). Mgbe ahụ, m tetara n'ụra nke ukwuu.
Dị ka anụmanụ totem , ọ pụtara na m ga na -akpachi anya na mmetụta nke m. Ahịrịokwu abụọ na -esote m chọpụtara na ọ gbasara m: Ndị nwere ọbọgwụ dị ka totem anaghị enwe ahụ iru ala na ọtụtụ ndị mmadụ na ndụ ha. Eleghị anya ha na -enwe mmetụta naanị na mmemme ha n'etiti mmụọ ndị ikwu ha. Ọdịdị ọbọgwụ nwere ike igosi na anyị ga -enwe ohere ime ya. Ọbọgwụ na -echetara anyị na anyị ga -alaghachi na akụkụ nke onwe anyị ma ọ bụ ihe omume na -eme ka anyị nwee ahụ iru ala na ahụ iru ala.
Nke ahụ ọ na -ekwu maka ohere ọrụ ọhụrụ? (Aga m etinye akwụkwọ - ọzọ na Satọde). Ma ọ bụ dị ka onye na -ahụ maka omume? Ma ọ bụ ihe m bu n'obi iji egwu mee?
Anyị ga -ahụ, opekata mpe, m jiri aka mepere emepe were mmetụta m, nke ahụ bụkwa nnukwu nzọụkwụ.
N'agbanyeghị ntaramahụhụ ka nrọ na anụmanụ totem si eme ka ihe niile doo anya, ana m ele ya oge ọ bụla.
HEBREW AFỌ 5777 PỤME NKE amụma
Amụma na nke mmụọ pụtara nke cricket
Amụma pụtara oke bekee
Amụma pụtara mmiri nsụda mmiri na mmiri
Nrọ Amụma Banyere Ọdụm